News | सामाजिक सञ्जाल
News | Tag: सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ कार्यान्वय
एजेन्सी । सम्बन्ध बनाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर, यसलाई जोगाइ राख्न र टिकाइ राख्न निकै कठिन हुन्छ । केही सम्बन्धहरु निकै लामो समयसम्म पनि चल्ने गर्छन् । तर, केही सम्बन्धहरु सुरुवात भएको केही दिनपछि नै टुट्ने गर्छन् ।
चितवन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ठगी गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
तनहुँ । प्रहरीको साइवर ब्यूरोले अश्लिल भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पठाउने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
फेसबुकले घटाउँछ जीवनप्रतिको १४ प्रतिशत खुशी
एजेन्सी । फेसबुकले अब स्वास्थ्य चेतावनी दिनुपर्छ सायद । किनकी सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने बालबालिका खुशी नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको रूपमा फेसबुक र ट्वीटरको आगमनपछि विश्व अत्याधिक साँघुरिएको छ । यसले आफुलाई वैकल्पिक मिडियाको रूपमा जबर्जस्त उभ्याएको छ । यसको उपयोगिता, प्रभाव र दुष्प्रभावहरूलाई लिएर बहसहरू समेत व्यापक भइरहेका छन् । तर यसपछिको विकल्प के भन्ने प्रश्न चैँ अझै निरुत्तरित छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाललाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न ढंगले प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रयोग जे जसरी भए पनि सामाजिक सञ्जालमा नजोडिनु भनेको अहिले ‘असामाजिक’ हुनुसरह भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा कति सक्रिय छन् ? उनीहरूले त्यसको कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर यहाँ १२ जना नेताको सामाजिक सञ्जाललाई नियालिएको छ ।